Dybala oo hakad geliyay wadahadaladii heshiis kordhinta ee Juventus, Miyuu u socdaa Real Madrid? | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » italian Serie A » Dybala oo hakad geliyay wadahadaladii heshiis kordhinta ee Juventus, Miyuu u socdaa Real Madrid?
Dybala oo hakad geliyay wadahadaladii heshiis kordhinta ee Juventus, Miyuu u socdaa Real Madrid?	Waxaa Qoray: Abbas Ali Hassan Taariikh: 5-April-2017
Xiddiga qaab ciyaareedka fiican ku jira ee Paulo Dybala ayaa hakad galiyay wadahadaladii heshiis kordhinta ahaa ee uu kula jiray kooxda Juventus xilli da,yarkani maamulka Juventus hal shardi.
Weeraryahankan reer Argentine ayaa bilhii ugu dambeeyay wadahadalo kula jiray maamulka kooxda juventus iyaga oo doonayay in ay heshiis wakhti dheer ah ka saxiixadaan si ay meesha uga saaraan xiisaha ay kooxda Man United,Real Madrid iyo Barcelona u qabaan adeegiisa.
Laakiin Xiddigan ayaa war cusub ula yimid isaga oo maamulka Juventus ka dalbaday in mushahar kordhin blaadhan loo sameeyo si uu heshiis cusub u saxiixo.
Warkan ayaa soo jeedinaya dareenka kooxihii u waalanayay adeega xiddigan reer Argentine ee ay ugu horeeyaan kooxaha reer Spain ee Barcelona iyo Real Madrid.
Juventus ayaa ku qasaban in ay miiska saarto dalabaadka da,yarkan ama ay dhamaadka xilli ciyaareedkan u waydo mid ka mid ah kooxaha reer Spain.